“သားကိုသားလှူထားပြီးသား နိုင်ငံအတွက်ရဲဝံ့မယ်”လို့ပြောခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းလေး ခန့်အောင်ဖြိုး – Cele Posts
“သားကိုသားလှူထားပြီးသား နိုင်ငံအတွက်ရဲဝံ့မယ်”လို့ပြောခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းလေး ခန့်အောင်ဖြိုး
သူငယ်ချင်း ခန့်အောင်ဖြိုး သူ့မေမေဆီနောက်ဆုံးပို ခဲ့တဲ့စာလေး“မေမေလည်းမပူနဲ့ သားလည်းမပူဘူး စိတ်ချပါ သားကိုသားလှူထားပြီးသား နိုင်ငံအတွက်ရဲဝံ့မယ်။ဘုရားရှင်ခေတ်မှာ ရဟန်းဝတ်မယ် ငရဲခေတ်မှာ လူသတ်မယ်” တဲ့သွေးသားမတော်စပ်တဲ့ ကိုယ်တွေတောင် မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျနေတာ😭
မိသားစုတွေနှလုံးသားတွေကြွေမွပျက်စီးနေပါပြီ😭💔၁၉ နှစ် Civil First Year ကျောင်းသားပါ သူရဲကောင်း ခန့်အောင်ဖြိုး၊ ပညာတတ်တွေ ဆုံးရူံးခဲ့ရပြီ။
မိခင် – ရှူးတိုးတိုး ကျမသားလေး ဒီမှာရှိနေတာ ဘယ်သူမှ မပြောပါနဲ့ သူတို့တွေ လာဆွဲလိမ့်မယ် မောင်လေး -မေမေသားပြန်လာရင်ကြက်ကြော် စားမယ်နော် အမေတစ်ခု သားတစ်ခု ဘယ်လောက်တောင်ချစ်ကြရှာမလဲ သူလို့ပဲ ကျဆုံးတဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်း အမေတွေရဲ့ ငိုကြွေးသံ ညံလို့ ….ရင်းရက်လေပြီပေါ့ ငါ့ညီရယ်….မင်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဝင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကို ငါတို့ဆက်တိုက်မယ်…..
မင်းလိုချင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး ဖြစ်လာအောင် ငါတို့ဆက်ကြိုးစားမယ်….ငါ့ညီလေးရေ ငါတို့ညကမှ စကားပြောခဲ့ကြသေးတယ်ကွာ….
တကယ်ကို စိတ်မကောင်းပါဘူး ညီငယ်ရေ။ငါတို့မင်းရဲ့စွန့်လွှတ်မှုကို အလကားမဖြစ်စေရဘူးလို့ ကတိပြုပါတယ်ကွာ…..ငါတို့အကြွေး ရအောင်ပြန်ယူမယ်….
“သားကိုသားလှူထားပွီးသား နိုငျငံအတှကျရဲဝံ့မယျ”လို့ပွောခဲ့တဲ့ သူရဲကောငျးလေး ခနျ့အောငျဖွိုး
သူငယျခငျြး ခနျ့အောငျဖွိုး သူ့မမေဆေီနောကျဆုံးပို ခဲ့တဲ့စာလေး“မမေလေညျးမပူနဲ့ သားလညျးမပူဘူး စိတျခပြါ သားကိုသားလှူထားပွီးသား နိုငျငံအတှကျရဲဝံ့မယျ။ဘုရားရှငျခတျေမှာ ရဟနျးဝတျမယျ ငရဲခတျေမှာ လူသတျမယျ” တဲ့သှေးသားမတျောစပျတဲ့ ကိုယျတှတေောငျ မကျြရညျပေါကျကွီးငယျကနြတော😭
မိသားစုတှနှေလုံးသားတှကွှေမှေပကျြစီးနပေါပွီ😭💔၁၉ နှဈ Civil First Year ကြောငျးသားပါ သူရဲကောငျး ခနျ့အောငျဖွိုး၊ ပညာတတျတှေ ဆုံးရူံးခဲ့ရပွီ။
မိခငျ – ရှူးတိုးတိုး ကမြသားလေး ဒီမှာရှိနတော ဘယျသူမှ မပွောပါနဲ့ သူတို့တှေ လာဆှဲလိမျ့မယျ မောငျလေး -မမေသေားပွနျလာရငျကွကျကွျော စားမယျနျော အမတေဈခု သားတဈခု ဘယျလောကျတောငျခဈြကွရှာမလဲ သူလို့ပဲ ကဆြုံးတဲ့ အာဇာနညျ သူရဲကောငျး အမတှေရေဲ့ ငိုကွှေးသံ ညံလို့ ….ရငျးရကျလပွေီပေါ့ ငါ့ညီရယျ….မငျး ယုံယုံကွညျကွညျနဲ့ ဝငျခဲ့တဲ့တိုကျပှဲကို ငါတို့ဆကျတိုကျမယျ…..
မငျးလိုခငျြခဲ့တဲ့ မွနျမာပွညျကွီး ဖွဈလာအောငျ ငါတို့ဆကျကွိုးစားမယျ….ငါ့ညီလေးရေ ငါတို့ညကမှ စကားပွောခဲ့ကွသေးတယျကှာ….
တကယျကို စိတျမကောငျးပါဘူး ညီငယျရေ။ငါတို့မငျးရဲ့စှနျ့လှတျမှုကို အလကားမဖွဈစရေဘူးလို့ ကတိပွုပါတယျကှာ…..ငါတို့အကွှေး ရအောငျပွနျယူမယျ….
တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ကုသိုလ်ဖြစ် ကြာဇံကြော် ပွဲ၁၀၀ ကိုလိုက်လံ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း